Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း )
Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Prochlorperazineသသည်Promethazine အုပ်စုဝင်ဖြစ်ပြီးအချို့သောအခြေအနေများ (ဥပမာ။။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်၊ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးနောက် ) နှင့်ဆက်စပ်သောပျို့အန်ခြင်းများကိုကုသရန်သုံးသည်။
-အထုတ်ကိုဖြည်ပြီး ဆေးတောင့်ကိုထုတ်ပါ။ ထို့နောက်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းစအိုထဲသို့တစ်နေ့လျှင်၂ကြိမ်ထည့်ပါ။ ဆေးထည့်ပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိဆက်လက်လဲလျောင်းနေပါ။ သွေးကြောထဲသို့ ဆေးကိုစုပ်ယူသွားစေရန်အတွက် ဆေးတောင့်ထည့်ပြီးတစ်နာရီကျော်ခန့်အကြာထိဝမ်းသွားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆေးတောင့်သည်စအိုထဲသို့ထည့်ရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးပမာဏသည်သင်၏အသက်၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်၊ဆေးအပေါ်တုန့်ပြန်မှုတို့အပေါ်မူတည်ပါသည်။ ကလေးများတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါသည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲမိမိသဘောနှင့် ဆေးပမာဏတိုးခြင်း၊အကြိမ်ရေတိုးခြင်းတို့ကိုမပြုလုပ်ရ။ အကယ်၍ ရောဂါအခြေအနေမသက်သာလျှင်သို့မဟုတ်ပိုဆိုးလာလျင်သင့်ဆရာဝန်ကိုအကြောင်းကြားပါ။
Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးညွှန်းတွင်ပါသမျှလမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကိုလိုက်နာပါ။ အကောင်းဆုံးသောအကျိုးအာနိသင်ကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်သင့်ဆရာဝန်အနေနှင့် ဆေးပမာဏကိုအခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲပါလိမ့်မည်။Prochlorperazineကိုကာလကြာရှည်စွာအသုံးပြုရပါကလိုအပ်သောစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများကိုမကြာခဏဆိုသလိုခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည်ဓါတ်မှန်ရိုက်ရန်သို့မဟုတ်အကြောထဲဆေးတစ်မျိုးထိုးသွင်းပြီးကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်ရိုက်ရန်လိုအပ်ပါကProchlorperazineသောက်သုံးခြင်းကို ခေတ္တရပ်ထားရန်လိုပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဆရာဝန်များကိုသင်Prochlorperazine သောက်သုံးနေရကြောင်းကြိုတင်၍ သေချာစွာ ပြောပြပါ။
ကာလကြာရှည်စွာProchlorperazineကိုသုံးစွဲပြီးနောက်ရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းသည်အခံရခက်သော ဆေးဖြတ်သည့်လက္ခဏာများကိုခံစားရစေနိုင်၍ ဆေးကိုရုတ်တရက်မဖြတ်လိုက်ရပါ။Prochlorperazineကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်မလိုတော့ပါကအဆိုပါ ဆေးဖြတ်သည့်လက္ခဏာများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဆရာဝန်ထံမှအကြံဉာဏ်တောင်းခံပါ။
Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Prochlorperazineကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့Prochlorperazineကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Prochlorperazine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Prochlorperazineကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Prochlorperazineကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများသည်Prochlorperazine၏အာနိသင်ကို နှောင့်ယှက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတခုကိုခံစားနေရပါကသင့်ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ အထူးသဖြင့်
အခြားသောProchlorperazineအုပ်စုဝင်ဆေးတမျိုးမျိုး (ဥပမာ။။ thioridazine )ကိုသုံးစွဲစဉ်ဆိုးရွားသော ဘေးထွက်လက္ခဏာများကိုခံစားရခြင်းများရှိခဲ့လျှင် (သွေးပြဿနာများ၊အသားဝါလာခြင်း၊မျက်ဖြူသားဝါလာခြင်း)
နှလုံးရောဂါ (ရင်ဘတ်အောင့်တတ်ခြင်း၊နှလုံးအဆို့ရှင်ပြဿနာများ)၊ သွေးရောဂါမျာ်း (သွေးအားနည်းရောဂါစသည်)၊ဆီးချို၊အသည်းရောဂါ (အသည်းခြောက်ခြင်းစသည်)၊သွေးတိုးတတ်ခြင်း၊သွေးပေါင်ကျတတ်ခြင်း၊ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ၊neuroleptic malignant syndrome (NMS)ရောဂါ၊ tardive dyskinesia (TD) ရောဂါ၊ရိုးတွင်းချဉ်ဆီဆိုင်ရာပြဿနာမျာ်း(သွေးဖြူဥပမာဏနည်းခြင်းစသည်)၊ဆီးကျိတ်ရောင် ရောဂါ၊ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးမျိုး (စိတ်ကျရောဂါစသည်)၊ adrenal ဂလင်းကင်ဆာ(pheocromocytoma) အစရှိသည့် ရောဂါများရှိလျှင်
ပန်းနာရင်ကျပ်၊အဆုတ်ပိုးဝင်သို့မဟုတ်အခြားအဆုတ်နှင့်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများရှိလျှင်၊ရေတိမ်ရှိလျှင်၊သို့မဟုတ် ရေတိမ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိလျှင်
အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါရှိလျှင်၊အသက်ကြီး၍သတိမေ့တတ်လျင်၊dopamine ကျဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာသော ခြေလက် တုန်ယင်၊ တောင့်တင်း၊နှေးကွေးကာ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်သော ရောဂါ (Parkinson disease)သို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာဆိုးဝါးလာသော ဦးနှောက် နဲ့အာရုံကြောရောဂါ (Reye syndrome)ရှိလျှင်
သွေးတွင်း prolactin ဟော်မုန်းများနေလျှင်သို့မဟုတ်အချို့သောကင်ဆာများဖြစ်ဖူးလျှင် (ရင်သားကင်ဆာ၊ပန်ကရိယကင်ဆာ၊ပစ်ကျူထရီဂလင်းကင်ဆာ၊ဦးနှောက်ကင်ဆာစသည်) သို့မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိလျှင်။
နှလုံးခုန်မမှန်စေသည့်ဆေးများကိုသုံးစွဲနေရလျှင်။ မည်သည့်ဆေးများသည်နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းကို ဖြစ်စေကြောင်းသင့်အနေနှင့်မသေချာပါကဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် ××× ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများခံစားရပါက Prochlorperazine သောက်သုံးခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးဆရာဝန်နှင့်အမြန်ပြသပါ။
အသားရေ ဖြူဖျော့ခြင်း၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ သွေးခြည်ဥလွယ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ တုပ်ကွေးလက္ခဏာများ ပြခြင်း။
ဖျားပြီးအဆစ်အမြစ်များ ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်း၊အကျိတ်များ ရောင်ခြင်း၊ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊အန်ခြင်း၊မူမမှန်သောအတွေးများအမူအကျင့်များ ပေါ်လာခြင်း၊အသားအရေအရောင်မမှန်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Prochlorperazineဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အချို့ဆေးဝါးများသည် Prochlorperazine နှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သဖြင့်အကယ်၍သင်သည်အခြားဆေးဝါးများကိုသုံးစွဲနေရပါကသင့်ဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ။ အထူးသဖြင့်
-ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်လိုသော/မလိုသော ဆေးအများအပြား (ဥပမာ။။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကိုကုသရာတွင်သုံးသော ဆေးများ၊သွေးခဲခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများတွင်အသုံးပြုသော ဆေးများ၊ကင်ဆာဆေးများ၊ပိုးသတ်ဆေးများ၊အရောင်ကျဆေးများ၊အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ၊နှလုံးဆေးများ၊သွေးတိုးကျဆေးများ၊အဆီကျဆေးများ၊နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းကိုကုသသောဆေးများ၊စိတ်ရောဂါကုဆေးများ၊ပျို့အန်ခြင်းကိုကုသသော ဆေးများ၊Parkinson disease ရောဂါတွင်သုံးသောဆေးများ၊အတက်ကျဆေးများ၊အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဆေးများ၊ဆီးရောဂါအတွက်ဆေးများ)၊ဗီတာမင်အားဆေးများ၊သဘာဝအားဖြည့်ဆေးများ၊ဖြည့်စွက်စာများ (ဥပမာ။။ သဘာဝလက်ဖက်ရည်၊coenzyme Q10၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ဂျင်ဆင်း၊ဂျင်ကိုမြစ်၊ St.John’s wort) တို့သည် Prochlorperazine နှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သည်။
သင်သောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးသည် Prochlorperazine နှင့်ဓါတ်ပြုခြင်းရှိမရှိမသေချာပါကဆရာဝန်နှင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Prochlorperazineကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Prochlorperazineဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆေးပြား ——>၅ – ၁၀မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်မှ လေးကြိမ်။
ဆေးတောင့်——->၁၅မီလီဂရမ်ကို ဝေဒနာခံစားရချိန်သို့မဟုတ်၁၀မီလီဂရမ်ကို၁၂နာရီခြားတစ်ခါ။ ပုံမှန် ဆေးပမာဏနှင့်မသက်သာသောလူနာများတွင်သာတစ်နေ့လျှင်၄၀မီလီဂရမ်ထက်ပို၍အသုံးပြုသင့်သည်။
အသားထိုးဆေး ———>၅ – ၁၀မီလီဂရမ်။ အကယ်၍လိုအပ်လျှင်၃နာရီသို့မဟုတ်၄နာရီခြားတစ်ခါထပ်ပေးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်းဆေးပမာဏမှာတစ်နေ့လျှင်၄၀မီလီဂရမ်ထက်မများသင့်ပါ။
အကြောသွင်းဆေး ——->၂.၅ – ၁၀မီလီဂရမ်ကို 5mg/min နှုန်းထက်မမြန်စေဘဲ ဖြည်းဖြည်းသွင်းပေးရမည်။ တစ်ခါသွင်းလျှင်၁၀မီလီဂရမ်ထက်မပိုရ။ စုစုပေါင်းဆေးပမာဏမှာတစ်နေ့လျှင်၄၀မီလီဂရမ်ထက်မများသင့်ပါ။
အသားထိုးဆေး——->၅ – ၁၀မီလီဂရမ်ကို မေ့ဆေးမပေးမီ၁နာရီသို့မဟုတ်၂နာရီအလိုတွင်ထိုးရမည်(လိုအပ်ပါကမိနစ်၃၀အတွင်းတကြိမ်ထပ်ပေးနိုင်သည်)။ သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်စဉ်/ခွဲစိတ်ပြီးနောက်လက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန် (လိုအပ်ပါကတကြိမ်ထပ်ပေးနိုင်သည်)။
အကြောသွင်းဆေး——–>၅ – ၁၀မီလီဂရမ်ကို မေ့ဆေးမပေးမီ၁၅မိနစ်သို့မဟုတ်မိနစ်၃၀အတွင်းအကြောသွင်းဆေးကို ဖြည်းညင်းစွာ ပေးရမည်။ သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်စဉ်/ခွဲစိတ်ပြီးနောက်လက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန် (လိုအပ်ပါကတကြိမ်ထပ်ပေးနိုင်သည်)။ တစ်ကြိမ်သွင်းလျှင်၁၀မီလီဂရမ်ထက်မပိုရ။ ဆေးသွင်းနှုန်းသည်တစ်မိနစ်လျှင်၅မီလီဂရမ်ထက်မပိုရ။
ဆေးပြား : ၅မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့လျှင်၃ကြိမ်မှ၄ကြိမ်။
ဆေးတောင့် : ၁၅မီလီဂရမ်ကိုစတင်ပေးရမည်သို့မဟုတ်၁၀မီလီဂရမ်ကို၁၂နာရီခြားတခါ ပေးရမည်။
၅ – ၁၀မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့လျှင်၃ကြိမ်မှ၄ကြိမ်
သောက်ဆေး—–၁၀မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့လျှင်၃ကြိမ်မှ၄ကြိမ်။ ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာသွားသည်အထိသို့မဟုတ် ဘေးထွက်လက္ခဏာများစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်အထိ ဆေးပမာဏကို၂ရက်တခါ၊၃ရက်တခါတိုးသွားပါ။ အချို့လူနာများသည်တစ်နေ့လျှင်၅၀မှ၇၅မီလီဂရမ်ပမာဏသောက်ခြင်းဖြင့် ကျေနပ်လောက်သောအာနိသင်ကိုရရှိသည်။ ပိုဆိုးသောလူနာများတွင်အများဆုံးသုံးရသော ဆေးပမာဏမှာ၁၀၀ – ၁၅၀မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်။
အသားထိုးဆေး——->အလွန်ဆိုးရွားသောလူနာများတွင်အလျှင်အမြန်အာနိသင်ရစေရန်ကနဦးဆေးပမာဏအဖြစ်၁၀ – ၂၀မီလီဂရမ်အားတင်ပါးထိုးဆေးအဖြစ်နက်နက်ထိုးပါ။ ထိုသို့ကနဦးဆေးထိုးပြီးနောက်လူနာအများစုတွင်အာနိသင် ကောင်းစွာပြလေ့ရှိပါသည်။ အကယ်၍လိုအပ်လျှင်၂နာရီခြားသို့မဟုတ်၄နာရီခြားတစ်ခါ (ပိုဆိုးလျှင်တစ်နာရီတစ်ခါ) ထပ်ပေးနိုင်သည်။၃ကြိမ်သို့မဟုတ်၄ကြိမ်ထက်ပိုထိုးရခြင်းမှာရှားပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများအား ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနောက်ထိုးဆေးနှင့်ပမာဏတူသို့မဟုတ်ပမာဏပိုများသော သောက်ဆေးသို့ ပြောင်းပါ။ အကယ်၍ (ရှားရှားပါးပါး) ထိုးဆေးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပေးရမည်ဆိုပါက၁၀ – ၂၀မီလီဂရမ်ကို၄နာရီသို့မဟုတ်၆နာရီခြားတစ်ခါ ပေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးများတွင်ပမာဏအတန်သင့်ပေးလျှင်ပင်ကြွက်သားများ တောင့်တင့်ခြင်း၊ရုန်းခြင်း၊ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း အစရှိသည့် လက္ခဏာများရနိုင်ခြေပိုများသဖြင့်အနည်းဆုံးပမာဏကိုသာအသုံးပြုပါ။
Prochlorperazine (ပရိုကလိုပါရာဇင်း ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Prochlorperazineကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြား : ၅မီလီဂရမ်၊၁၀မီလီဂရမ်
ဆေးတောင့် : ၁၀မီလီဂရမ်၊၁၅မီလီဂရမ်
ထိုးဆေး : 2ml (5mg/ml) , 10ml (5mg/ml)
စအိုထည့်ဆေးတောင့် : ၂.၅မီလီဂရမ်၊၅မီလီဂရမ်၊၂၅မီလီဂရမ်
သောက်ဆေးအရည် : 5mg/ml
Prochlorperazineကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။